Qaaxo, Xiniin iyo Inna Mayle oo Bogga Qorahey.com, Dadweynaha Reer Qoraxeey u Saadiyey Silac – Rasaasa News
Jun 11, 2010 Dadweynaha Reer Qoraxeey u Saadiyey Silac, Qaaxo, Xiniin iyo Inna Mayle oo Bogga Qorahey.com
Kooxda Jwxo-shiil, saddexda ruux ee u joogta Australia ayaa iyagu waxay ka soo jeedaan gabalka Qoraxeey, waxayna wax ku qoraan bogga Qorahey.com. Saddexdan ruux oo kala ah Maxamed Ismaaciil Cumar [Qaaxo], Roda Mayle Ibrahin [afarey] iyo Maxamed Ibrahin [xiniin], ayaa iyagu ku sifoobay odhaahda ah ” Hooyo tidh Eebo wiilka iiga hadli, kolkuu hadlayna uu yidho Hooyo aan ku barakeeyo, ee tidhi Eebo iga aamusii”, eegga waxay leeyihiin dadweynaha reer Qoraxeey leeyihiin Eebow naga aamusii.
Been aan sal iyo raad toona lahayn oo ay dadweynuhu aad uga yaabaan, ayey dharaar walba soo dhoob dhoobaan saddexda ruux ee iyagu kaliya garanaya wax ka sheega gabalka ay ka yimaadeen ee Qoraxeey.
Gabalka Qoraxeey, xiligan waxaa uu ka mid yahay gabalada Somalida Ogadeeniya gabalka ugu nabada badan, ka dib kolkii ay dadweynaha reer Qoraxeeye si cad uga soo horjeedsadeen kooxda Jwxo-shiil.
Dadweynaha reer Qoraxeey oo ahaa dadkii abuuray ee horseedkana ka ahaa halganka ay waday Jwxo, ayaa iyagu ka jeedsaday dhawrkii sano ee ugu dambaysay, kolkii ay ogaadeen in ayna jirin halgan dhul lagu xoraynayo balse ay jiraan dad dhaqaale ku doon ah dhiiga dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa hadh cad laga raray kooxda Jwxo-shiil xaruntii ay awal hore Jwxo ku lahaan jirtay gabalka Qoraxeey, ka dib kolkii ay dadweynuhu arkeen Jwxo-shiil iyo ujeedo xumadiisa aan xornimo raadis salka ku lahayn.
Intii xiligaas ka dambaysay dadweynah reer qoraxeey waxay heleen nafis weyn iyo nabad, ka dib kolkii ay xukuumada Itobiya iyo reer Qoraxeey isla qaateen nabadaynata gabalka Qoraxeey.
Waxaa dadweynaha ka yaabiyey taxa magacyada ee uu soo qoray bogga ku maxaabsada magaca gabalka Qoraxeey. Arintaas oo aan wax ka jiraa jirin, lama qarin karo maanta xadhig loo gaysto gabadh yar oo 2 sano jir ah, maxaad u malayn meesha lagu xidhay 30 ruux oo hal gabal ka soo jeeda.
Waxaanu waydiinay magacyada dadka ay soo safeen, waxaana la waayey hal magac oo sax, waxaase la gartay 4 ruux oo waa hore dhintay magacyadood, oo sida la is yidhi Eebahay qalinka uun ku hagaajiyey.
Sidaasi daraadeed waa was-waas wax kasta oo ay soo bandhigto Qorahey.com
Dagaal ka dhacay magaalada Burco ee Waqooyiga Somaliya